thinzar's blog: Taiwan First Impression
Interesting to hear minimum spending thing and weight unit. My phone got that LINE app, I never use it and the problem is that I could not remove it :P
14/5/15 6:18 PM
Ko Yan Naing Aye>> yeah right? different places got small little interesting things :)
you can try "adb uninstall jp.naver.line.android" from command line. Oh, but if that LINE app came with stock ROM, then cannot remove i guess..
14/5/15 9:09 PM
ကျေးဇူးပဲနော်... အဲဒီ command ကို ဘယ်မှာ ရိုက်ရမှာလဲ ကူညီလက်စနဲ့ ပ​ြောပေးပါဦး။ terminal emulator app ကို install လုပ်ပြီး ရိုက်ထည့်ကြည့်တော့ waiting for device ဆိုပြီး ရပ်သွားပြီး ဘာမှ မဖြစ်လို့။
P.S. အရင်နေ့က ကွန်မန့်က မပေါ်လို့ ပြန်ရိုက်လိုက်တာ duplicated ဖြစ်သွားရင် sorry ပါ။
4/6/15 2:54 PM
ADB (Android Debug Bridge) အရင်သွင်းရမှာ။ ပြီးရင် command line ကနေ သုံးလို့ရပြီ။ root လုပ်တာ ROM တွေ flahsh လုပ်တာ ADB နဲ့ fastboot သွင်းထားရုံဘဲ :)
Windows/Mac/Linux မှာ ADB သွင်းနည်း - The easiest way to install ADB on any OS
5/6/15 10:28 AM
Success ဖြစ်သွားပြီး line icon နေရာမှာ စက်ရုပ်လေး ဖြစ်သွားတယ်။ နှိပ်ရင် line app တက်လာတယ်။ ဖုန်းကို restart လုပ်လိုက်ရင် အရင်အတိုင်း line icon ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ ဖုန်းကို Root မလုပ်ချင်တော့ ရှိပါစေတော့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အတွေ့အကြုံ အသစ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဓာတ်ပုံလေးတွေ လှတယ်။ .နဲနဲပို များများရိုက်တင်ပါလား။ :)
8/6/15 5:59 PM